စိုးလွင်လွင် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / စိုးလွင်လွင်
Category Archives: စိုးလွင်လွင်
တေးဂီတ – စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင် နှင့် အဖွဲ့ မန္တလေးဒိုး ၊ သန်းမောင်ဝင်း ၊ ဖိုးသား အသံဖမ်း – တိုနီ (လင်း) 01. နှစ်သစ်ချစ်ဦး – ခင်မောင်ထူး 02. မညိုမြ – ပုလဲ 03. ရေတွေစိုကုန်ပြီ – သန်းနိုင် 04. ပန်းမျိုးတစ်ရာ – ဟေမာနေ၀င်း 05. ချမ်းပါတယ် – သိန်းတန် 06. ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ – မြတ်ဝတ်ရည် 07. ပိတောက်လက်ဆောင် – သိန်းတန် 08. ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို – ခင်မောင်ထူး 09. ရွှေမန်းမာလာ – ခိုင်ခင်ဦး 10. Non-Stop : ရက်မြတ်သင်္ကြန် – … Continue Reading →
March 28, 2013 Snuo Mwoani စိုးလွင်လွင် မြန်မာပြည်သိန်းတန် ပုလဲ ဟေမာနေ၀င်း ခင်မောင်ထူး မီမီဝင်းဖေ သန်းနိုင် သင်္ကြန်သီချင်းများ မြတ်ဝတ်ရည် ခိုင်ခင်ဦး Leaveacomment
စိုးလွင်လွင်-ဝတ်မှုန်နှင့်ဘဝဆက်တိုင်းအတူ( ဗွီဒီယို & MP3 )
Download Video ၀၁။ မိုးလုံးမှိုင်း ၀၂။ လွမ်းရတဲ့ညတွေလွန်ပါစေ ၀၃။ ဘဝဆက်တိုင်းအတူ ၀၄။ ကုန်လွယ်လွန်းလိုက်တာ ၀၅။ စိဉ္စမာဏဥာဏ် ၀၆။ ယူပါမေရေယူ ၀၇။ ဝတ်မှုန် ၀၈။ ရင်ခတ်အလွမ်း ၀၉။ အင်းလျား ၁၀။ ချစ်သောနွေ ၁၁။ သဇင်ကြွေတဲ့ဆောင်း ၁၂။ ယု ၁၃။ ယုံကြည်တတ်ပါ Download MP3 Mediafire
January 7, 2011 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Leaveacomment
ကျောင်းသီချင်းများစုစည်းမှု – ၃
၁။ အလွမ်းမပြေ (19:18) ၂။ လွမ်း ခင်မောင်တိုး ၃။ အဆောင်သူရဲ ဂရေဟမ် ၄။ ဂျပ်ဆင်ထိပ်ကလရိပ်ပြာ ထူးအိမ်သင် ၅။ တစ်ချိန်တုန်းကတက္ကသိုလ် မင်းထက် ၆။ သြဥ အဲလက်စ် ၇။ နွေဦးကံ့ကော် ထူးအိမ်သင် ၈။ ငယ်သူမို့စိုးလွင်လွင် ၉။ 85 မန္တလေးညများ အငဲ ၁၀။ ဗင်းဆင့်ဗန်ဂိုးတမ်းခြင်း ထူးအိမ်သင် ၁၁။ ခွဲခွာရမယ့်နွေရက်များ ထူးအိမ်သင်
May 26, 2010 kogyithet 19:18 အငဲ အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (ကျား) အဲလက်စ် စိုးလွင်လွင် စည်သူလွင် ထူးအိမ်သင် ဂရေဟမ် ခင်မောင်တိုး Myanmar Artist 13 Comments
စိုးလွင်လွင် – ၀တ်မှုံ နဲ့ ဘ၀ဆက်တိုင်းအတူ
၀၁။ လွမ်းရတဲ့ညတွေလွန်ပါစေ ၀၂။ ၀တ်မှုံ ၀၃။ ဘ၀ဆက်တိုင်းအတူ ၀၄။ မိုးလုံးမှိုင်း ၀၅။ ယု ၀၆။ မငိုပါနဲ့မိုးရယ် ( ကုန်လွယ်လွန်းလိုက်တာ ) ၀၇။ အင်းလျား ၀၈။ ယူပါမေရယ် ယူ ၀၉။ ယုံကြည်တတ်ပါ ၁၀။ စိတ္တဇညမိုး ( စိဉ္စမာနဥာဏ် ) ၁၁။ ချစ်သောနွယ် ၁၂။ ရင်ခတ်အလွမ်း ၁၃။ သဇင်ကြွေတဲ့ဆောင်း ၁၄။ ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါ အမေ
February 28, 2009 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Myanmar Artist2Comments
စိုးလွင်လွင် – သံစဉ်သစ်သီချင်းများ
၀၁။ ချစ်လူမိုက် ၀၂။ အနံကြီးကွင်းကျယ် ၀၃။ ကောင်မလေး ၀၄။ သူဘယ်မှာလဲကွယ် ၀၅။ ဂန္တ၀င်ဆည်းဆာ ၀၆။ ရက်စက်တယ် ၀၇။ တစ်ချက်လောက်တော့ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ် ၀၈။ မာနမျက်နှာ ၀၉။ အဝေးရောက်ချစ်သူ ၁၀။ မျက်လုံးဝိုင်း ၁၁။ ရင်ဆိုင်ကြစို့ ၁၂။ စိတ်ဖြေသီချင်း ၁၃။ မင်းမှမင်း ၁၄။ ကျေပါတယ်
February 28, 2009 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Myanmar Artist 1 Comment
စိုးလွင်လွင် – ကျွန်တော်မသိတဲ့ ကျွန်တော်
February 26, 2009 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Myanmar Artist2Comments
စိုးလွင်လွင် – မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း
၀၁။ အမှတ်တမဲ့ ၀၂။ အလွမ်းရင့်လွမ်းမပြေ ၀၃။ ခရေ ၀၄။ မယုံရဲသေးဘူး ၀၅။ မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း ၀၆။ မေ့လိုက်မယ်ဟေ့ ၀၇။ မင်းမှမင်း ၀၈။ မိုးကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀၉။ မျက်လုံးရိုင်း ၁၀။ နေညိုနေပြီ ၁၁။ ဝေးဝေးမသွားနဲ့ ၁၂။ ရက်စက်တယ် ၁၃။ ရင်ခုံသံဘဝလမ်း
January 11, 2009 saiagag အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Myanmar Artist5Comments
စိုးလွင်လွင် – ကာရန်သစ်
၀၁။ သူရဲကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသား ၀၂။ မောင့်မျက်ရည်ဝိုင်း ၀၃။ ရင်ဆိုင်စရာစွမ်းအားမရှိတော့လိုပါ ၀၄။ သိလျက်နဲ့ ၀၅။ ငယ်ငယ်တုန်းကထက်ပိုချစ်မယ် ၀၆။ စိုးစိတ်တိုးတိတ်လွမ်းချိန် ၀၇။ လာမယ်ဆိုကြိုနေမှာလား ၀၈။ ငယ်သူမို့ ၀၉။ ချစ်သူစိတ်ကူး ၁၀။ ကျေနပ်တယ် ၁၁။ ကိုယ်ချစ် ၁၂။ အလွမ်းဆု ၁၃။ ကိုယ်ချင်းစာနာတက်ခဲ့ပြီ
January 1, 2009 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Myanmar Artist 1 Comment
၁။ အိမ်မက်ထဲကရထားကြီး – ထူးအိမ်သင် ၂။ မျှော်သူပျော်ရစေ – စိုင်းထီးဆိုင် ၃။ လမင်းသီချင်း – ခိုင်ထူး ၄။ မျှော်လင့်ချက်ညကဗျာ – အောင်ရင် ၅။ ယောင်္ကျားကောင်း – စိုးလွင်လွင် ၆။ ငါတိမ်တိုက် – ထူးအိမ်သင် ၇။ ယုံတမ်း – စိုင်းထီးဆိုင် ၈။ ချစ်သစ္စာ – အောင်ရင် ၉။ အိမ်မက်ပန်းချီ – ခိုင်ထူး ၁၀။ အချော့တော်စကား – စိုင်းထီးဆိုင် ၁၁။ လောကကြီးရဲ့မောင်းနှင်အား – ထူးအိမ်သင် ၁၂။ ချစ်တဲ့ဘက်ကလူ – အောင်ရင် ၁၃။ ကာရန်မဲ့ခင်မင်မှု – ခိုင်ထူး ၁၄။ ရက်သတ္တပတ် – … Continue Reading →
August 31, 2008 mmsong အခွေ (အများ) စိုးလွင်လွင် စိုင်းထီးဆိုင် ထူးအိမ်သင် အောင်ရင် ခိုင်ထူး5Comments
စိုးလွင်လွင် – အကောင်းဆုံးတေးများ
၀၁ . တမ်းတခြင်းများ……… ၀၂ . ခင်ဗျားလေး………. ၀၃ . မုန်းလို့ မဟုတ်ဘူး……… ၀၄ . အမုန်းခမ်း ………လူ ၀၅ . ရည်းစားလေး……..ထားဖို့ လိုပြီ ၀၆ . ရည်းစားမကောင်း…….ချစ်သူခေါင်း ၀၇ . ဒါလီ…………. ၀၈ . ဝေဒနာနဲ့ ………တွေ့ ဆုံခြင်း ၀၉ . ဘယ်သူမပြု………မိမိမှု ၁၀ . ငယ်ချစ်………..အတွက် . . သီချင်းလက်ဆောင် . Credit by sayargye
August 4, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင် Myanmar Artist5Comments
စိုးလွင်လွင် – ခွန်အားမျှပါ
၁။ ခွန်အားမျှပါ ၂။ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ခဲ့ပြီ ၃။ တစ်နေ့နေ့မှာ ၄။ လာမယ်ဆိုကြိုမှာလား ၅။ ကျေနပ်တယ် ၆။ မိုးပြေးလေး ၇။ နိမိတ် ၈။ တို့လမ်းကိုတို့ဆက်လျှောက်မယ် ၉။ ခေါင်းငုံ့ချစ်နေမယ် ၁၀။ မှန်တာပြောလျှင်သစ္စာ ၁၁။ တစ်ချက်လောက်တော့ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ် ၁၂။ လမ်းပေါ်ကလူ
May 30, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးလွင်လွင်3Comments